बाम गठबन्धन ः नवलपुरको विकासका लागि हामीलाई रोज्नुस्
नवलपुर, १ मंसिर । नवलपुर क्षेत्रमा बाम गठबन्धनले पनि आफ्नो चुनावी अभियानलाई तीव्र पारेको छ । बाम गठबन्धनका तर्फबाट नवलपुर क्षेत्र नं. १ का प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार भविश्वर पराजुलीले नवलपुरको विकासका लागि आफूहरुलाई रोज्न आग्रह गर्नुभएको छ । चुनावी घर दैलौ कार्यक्रम गरिरहेको बाम गठबन्धनका उम्मेदवारहरुले नवलपुर क्षेत्रको विकासका लागि अरु कुनै पनि पार्टि विकल्प नहुने दाबी गर्दै आएका छन् । नवलपुर क्षेत्रको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि आफ्नो उम्मेदवारी दिएको विभिन्न कार्यक्रममा पराजुलीले बताउँदै आउनुभएको छ । शुक्रबा देवचुली नगरपालिका वाड नं. ९, १४, १३ मा भएका कार्यक्रममा सुन्दर शान्त र समृद्ध नवलपुर क्षेत्रको विकासको भिजन आफूहरुसंग मात्र रहेको पराजुलीले बताउनुभयो । पराजुली समृद्धि नवलपुरको अभियन्ताको रुपमा यस अघिदेखि नै काम गर्दै आएको माआवादी केन्द्रले बताउँदै आएको छ । यसैगरी चुनावी अभियानका क्रममा गँैडाकोट १० र कावासोती वाड नं. ३ र ४ मा भएका कार्यक्रममा पराजुलीले भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल बनाउने आफूहरुको अभियानको रुपमा यस निर्वाचनलाई लिन समेत आग्रह गर्नुभएको छ ।
यसैगरी गैँडाकोट वाड नं. १० को चुनावी कार्यक्रममा प्रदेश सभा क का उम्मेदवार सूर्य न्यौपानेले नवलपुरको विकासको लागि स्पष्ट खाँका कोरिसकेको र यसको कार्यान्वयनका लागिपनि उपयुक्त स्रोत साधनको आधार तय भइसकेकाले आफूहरुको जितले मात्र नवलपुरको विकास सम्भव भएको बताउनुभयो ।